. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ဝေးနေဦးမယ့် .....
မနေ့က သင်္ကြန်ကြိုကြတယ် .. ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အလုပ်မသွားပဲ အမ်စီလိုက်တယ် .. သိကြားမင်းကိုလည်း အိမ်မက်ထဲမှာပဲ ကြိုလိုက်ရတယ် .. ၀ီရိယက အဲလိုကောင်းတာ .. နေ့လည် ဆေးခန်းသွား အမ်စီ ယူပြီးတော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အိမ်မှာ အိပ်လိုက်တာ ညနေ ၄နာရီထိုးရော .. ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလည်းပျက်သွားပြီး expo ကို သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သွားလိုက်တယ် .. ပစ္စည်းတွေကတော့ တော်တော်ဈေးချပါတယ် .. လူလည်းရှင်းတော့ ဈေးဝယ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ် .. မဟုတ်ရင် ပစ္စည်း အသေးလေးတခုပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်ချင်ဦး တQထဲ Qနေရတာ စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ် .. ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ ၇နာရီထိုးတာပဲ .. ညနေ စီးတီးဟောသွားပြီး ဗိုက်ဖြည့် ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ် .. အဲဒါ ကျမအတွက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့တဲ့ ..
ဒီနေ့တော့ သင်္ကြန် ကျပြီပေါ့ .. ဘာပဲပြောပြော ရန်ကုန်သင်္ကြန် အနည်းနဲ့ အများတော့ စည်ကားမှာပါ .. ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ယောင်မိတယ် .. ခုလောက်ဆို အိမ်မှာလည်း မုန့်တွေ လုပ်စားနေလောက်ရောပေါ့ .. ကျမမှာသာ ..း(
မတတ်နိုင်ဘူးလေ .. မိုးလင်းတာနဲ့ နိုးစက်သံကို မုန်းမုန်းနဲ့ ပိတ်ပြစ်ပြီး ထရတာပဲ .. တခါတလေလည်း နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို ငြီးငွေ့မိတယ် .. အလုပ်ပြီး အိမ် အိမ်ပြီး အလုပ်နဲ့ .. တခါတလေလည်း လမ်းသွားနေရင်း မိုးအုံ့အုံ့မှာ သင်္ကြန်အနံ့ကိုရမိတယ် .. စိတ်က လွမ်းမိပြန်ရော .. ဘယ်လောက်ထိ ဝေးနေရဦးမလဲ .. တကယ်ကတော့ မဝေးပါဘူး .. ကိုယ်က ဝေးဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲ .. နောင်တလား နောင်တတော့လည်း မရပါဘူး .. ခုနေနေတာ လုပ်နေရတာ မပျော်ပေမယ့် လုပ်သင့်တာလုပ်နေရတာပဲ .. အချိန်တန်ရင်တော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လူတိုင်းလုပ်ကြရတာပဲ .. ဒီတော့ နေသာပါတယ်လေ ..
အကျနေ့ တရက်လည်း ကုန်ဦးတော့မယ် .. မထူးခြားတဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ငြီးငြီးနဲ့ လုပ်နေရဦးမယ် .. အင်း .. ဒီလိုနေ့မျိုးတွေကျတော့ ကုန်ခဲနေသလို စိတ်ကထင်တယ် ..
P.S - သူများတွေ ပျော်နေကြမယ်လို့ ညစ်တစ်တစ်နဲ့ တွေးပြီး ရေးထားပါတယ် .. မနာလိုဘူးး(
ရေးသားသူ moekhar at 4/14/2009 05:25:00 PM